Home CLASSIC FOOTBALLER Ashley Cole Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano Weriyeyaasha
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee bidix Genius kaas oo loo yaqaan magaca; "Cashley". Su'aalkayaga Ashley Cole Carthead iyo Xogta Aan Bixin Karin Xogta waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku saabsantahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo waxyaabo badan oo OFF iyo ON-Pitch oo aan run ahayn oo la yaqaan ee isaga ku saabsan.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay inuu yahay awooda inuu mar uun ku noqdo daafaca bidix ee adduunka ugu fiican, lakiin wax yar ayaa ka fikiraya Ashley Cole Bio oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Ashley Cole Hooyo Sheeko Xogta Xogta Loo Yaqaan -Nolosha Hore
Ashley Callender Cole wuxuu ku dhashay maalinta 20th December December 1980 ee Stepney, London, United Kingdom. Waxa uu ku dhashay hooyadiis, Sue Cole (ilmo adeer ah Maria Carey) iyo aabbaha, Ron Callender oo ka soo jeeda Barbados.
Sheekada caruurnimada Cole waa mid xiiso leh, haddii aan caadi ahayn - sheeko ka mid ah dhibaatada iyo tijaabinta nolosha carruurnimada kuwaas oo ku barakeeyey tayada aan caadiga ahayn. Markii uu da 'yaraa, Cole waxuu arkay xiriirka ka dhexeeya waalidkiis ayaa sii xumaanaya. Ugu dambeyntii waxa ay kala tagtay markii Ashley Cole uu ahaa toddoba. Tani waxay ahayd markii aabihiis uu si geesinimo leh uga soo dhex baxay qoyska.
Cole, walaalkiis kaddib, Mathew iyo hooyadiis waa inay naftooda ku noolaadaan, iyagoo lacag la'aan ah. Ilmo kasta oo ku noolaa fasaxa waalidku wuxuu ogaan doonaa oo kaliya si aad u fiicnaan kara xanuunka qoto dheer ee uu keeni karo; Daraasad kasta waxay ka hadli doontaa cawaaqibka maskaxeed ee waxyeelleyn karta. Ashley Cole waa mid ka mid ah dad badan oo kuwaan la soo kulmay, saameyntuna waxay si cad u saameyn ku yeelataa noloshiisa maanta.
Ilmo ahaan, Cole wuxuu ka soo qayb galay Bow School ee Tower Hamlets. Tani waxay aheyd meeshii uu bilaabay kubbadda cagta iyo wakhti uu bedelay magaciisa Callender ilaa Cole. Hooyadiisa ayaa kula taliyay inuu bilaabo xirfad dhalinyaro, nasiib wanaag Ashley ayaa aqbalay kooxdiisii ​​hore, Arsenal, oo uu taageeray ilmo. Da'da 18, on 30 November 1999, wuxuu sameeyay kulankiisii ​​ugu horeeyay ee kooxda. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Ashley Cole Hooyo Sheeko Xogta Xogta Loo Yaqaan -Nolosha Xiriirka
Cole wuxuu bilaabay xiriir uu la yeeshay gabayada gabayada gabdhaha ee Cheryl Tweedy bishii Sebtembar 2004, markii ay ku noolaayeen guri dabaq ah oo ku yaal London.
As Cheryl Tweedy mar hore u dhig;"Aniga waxay la kulmeen Ashley, waxayna ahayd jacaylkii ugu horeeyay. Waxaan bartay labo isbuuc ka dib markii uu ahaa ciyaaryahan kubad sameeyaha ah, waxaana doonayay inaan iska daayo, sidoo kale ciyaartoyda kubada cagta ayaa leh nolol mashquul ah, waxaana heysta ciyaartoy badan. "
Waxay guursadeen 15 July 2006 oo ku yaala Wrotham Park, Hertfordshire.
Isla sannadkaas, Cole ayaa dacweeyay News of the World iyo The Sun wargeysyada loogu talagalay libel ka dib markii ay daabaceen sheegashooyin ah in uu ku lug lahaa a "Khaniisyada qaniisiinta".
Bishii Jannaayo 2008, labada lamaane waxay ku dhowdahay in ay kala tagaan ka dib markii eedeymaha loo soo jeediyay in Cole uu lahaa arrimaha iyada oo saddex dumar ah.
Cole marka dhageysiga dacwad lagu soo oogay iyo go'aansaday inuu nabad ka helo xaaskiisa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagu dhawaaqay 23 February Febraayo 2010 in lammaanuhu kala tagi lahaa ka dib markii la soo saaray eedeymo cusub oo sino ah. Saddex bilood ka dib, waxaa lagu dhawaaqay in Cheryl ay codsatay furiinka. Waxay si rasmi ah u furteen 3 September 2010. Qoyska Cheryl Cole, oo ay hoggaamisay Hooyo Joan, ayaa ka codsatay inaysan ku laabato ninkeedii hore ee xun.
Isla sannadkaas, Cole wuxuu soo saaray wareysi uu cinwaankeedu yahay, Difaaca, oo iibisay nuqulka 4,000 lixda wiig ee ugu horreeya ee sii deynta.
Cole saaxiibkiisii ​​hore, Jens Lehmann, ayaa cambaareeyay Cole si uu u qoro sheekada markii uu ahaa 25.
U guuritaanka: Wargeysku wuxuu shaaca ka qaaday in Ashley uu noqday nin gabi ahaanba ka duwan marka la barbar dhigo qofkii Cheryl khiyaameeyay sannadihii ay guursateen. Waxa uu sii waday gabar Talyaani ah, Sharon oo uu dhab ahaantii halis u yahay iyo midba midka kale. Labada carruurba way wada leeyihiin.
Intii uu guurey, Cheryl xaaskiisii ​​hore ayaa sameeysay. Beautiful Cheryl waxay la soo baxday Liam Payne, oo ah fanaan Ingiriis ah iyo heesta qoraaga oo uusoo caan baxay sida xubin ka mid ah kooxda wiilka One Direction.
Ashley Cole oo ah xaaska hore ee Cheryl Ann Tweedy ayaa la wareegay Liam Payne. Labada wiilba waxay leeyihiin wiil. Ashley mar hore ayuu u rajeeyay Cheryl iyo Liam inay farxad galaan mustaqbalkooda. Wuxuu u sheegay Cheryl sida nasiib u yeeshay wiilkeeda cusub inay tahay iyada oo waligeedna ogaa in ay sameyn lahayd hooyo cajiib leh. Farriinta ayaa [Cheryl] u soo jeesatay ilmo waxayna qirtay inay ugu dambeyntii dareentay sida xiritaanka xiriirkooda. Waxay ahayd runtii, hoogay.
Ashley Cole Hooyo Sheeko Xogta Xogta Loo Yaqaan -Arrimaha Booliska
Cole waxa uu boolisku qabay dhawr bambooyin yar yar. On 4 March March 2009 waxaa la qabtay kadib markii uu ku dhaarshay askari bilays oo ka baxsan koonfurta Kensington.
Waxaa loo qaaday saldhig bilays oo lagu soo saaray Ogeysiis Ganaax ah oo 80 ah ka hor inta aan la sii deyn. Arrin kale oo boolis ayaa ka dhacay 4th ee Janaayo 2010 markii Cole lagu helay dembi xawaareyn ah oo lagu galay 17 November 2009. Waxaa la duubay xaddiga xawaaraha qadiimka ah iyadoo la sameynayo mashiinka 104 ee xNUMX mph ee wadada A50 iyada oo loo marayo wadiiqo guri.
Cole ayaa naftiisa difaacay Maxkamadda Magistrate-ka ee Kingston isagoo sheegay in hubka xawaaraha bileysku uu ahaa mid qaldan. Markii uu arkay arintaan oo ka soo horjeeda isaga, Cole wuxuu bedelay sheegashadiisa isagoo sheegay in ficiladiisa uu ahaa mid la aqbali karo sababtoo ah wuxuu isku dayayay inuu ka baxsado paparazzi. Waxaa lagu ganaaxay £ 1000 waxaana laga reebay baabuur wadista afar bilood.
On 27 Febraayo 2011, Cole ayaa si khalad ah u toogtay arday da 'yar oo 21 ah (Tom Cowan) oo leh qalab hawo leh 22, oo ku yaala xerada tababarka Chelsea. Waxa uu ka soo xaday Tom oo kaliya shan fuudh, isaga oo aan u malaynaynin in qoryaha la raray. Ka dib markii qaar ka mid ah ka qayb qaadashada booliska, Cole si rasmi ah ayaa raaligelin ugu bixiyay Tom waxaana ka hadlay dhacdadii maamulka Chelsea.
Ashley Cole Hooyo Sheeko Xogta Xogta Loo Yaqaan -Nolosha Qoyska
Qoyska Ashley Cole ayaa ka yimid asal ahaan Barbados, jasiiradda Caribbean iyo barwaaqo madax bannaan oo British ah.
Aabe Cole, Ron Callender ayaa weli ku nool Australia. Ron, oo ah 60 sidii wakhtiga qorista ayaa weli laga soocay Ashley muddo sannado ah. Wuxuu mar yiri: "Waxaan sameeyay wax walba oo aan kula heshiiyay isaga laakiin wuxuu go'aansaday inuusan rabin dib u heshiisiin sidaas darteed waa inaan ixtiraamaa taas. Hase yeeshee, ma aanan haysan rajoe. Waa wiilkeyga, mar walbana waa uu noqon doonaa. "
Ron wax qarsoodi ah ayuu ka qarsoonaa nacaybka Ashley. Isagoo ka hadlaya gurigiisa meel u dhow Melbourne, Australia, halkaas oo uu ku nool yahay xaaskiisa iyo gabadhiisa labaad, wuxuu yiri: "Shaki la'aan, anigoo ah aabihiis wuxuu rabay Ashley inuu badbaadiyo guurkiisa." Ron Callender oo dhageysiga wiilkiisa kala tagay xaaskiisa ayaa ku adkeysanaya in Cole uu ka bartay qaladaadkiisa."Ashley ma lahan qofna qudh ah oo lagu eedeynayo furiinka waxaanan u maleynayaa inuu ku soo laabanayo si uu u arko aragtida Cheryl. Waan hubaa inuu ka bartay qaladkiisa. Kaliya Ilaah wuu ogyahay mustaqbalka, laakiin cidna way diidi kartaa inay dhowaadaan. Waxay yihiin saaxiibo waxayna weli is jecel yihiin. "
Hooyo: Ashley's hooyadiis Sue ayaa lagu amaanay taageerayaasha si ay u kiciyaan wiilasha markii ay aabaheed Ron Callender ay ku socdeen iyada. Maanta, waxay diiday inay dib ugu soo celiso isaga oo si aad ah u isku dayay in ay mideeyaan xidhiidhka jaban. Ashley wuxuu aad ugu dhow yahay hooyadiis sida lagu arkay sawirka hoose.
Hooyo qishi ah Ashley Cole mar ayey isku dayday inay udub dhexaad u noqoto mid nabad ah iyada oo dooneysa in ay isku daydo una badbaadiso guurka wiilkeeda Cheryl Cole. Nasiib darro, dadaalladii oo dhan way ku fashilmeen
Walaal: Ashley Cole wuxuu leeyahay walaalo ka yar kan oo magaciisa ku qoran magaca Matthew ama Matty Callender ee hoos ku sawiran. Waxa uu mar horeba ku lug lahaa shil baabuur oo halis ah oo ka dhacay 2008 kaas oo wararka ay sheegayaan in Matty uu ahaa "Nasiib nasiib leh inuu noolaado".
Matayoska kor ku xusan wuxuu helay nacayb badan Rio Ferdinand.
Goorma Ferdinand waxaa lagu dhuftay wejiga lacagta lagu shubo markii uu u dabaaldagay kooxdiisii ​​hore ee Manchester City, walaalkii hore ee Chelsea ee Matthew ayaa lagu yiri: 'Haa, waan ku faraxsanahay in Rio uu wajiga wajiga wajiga wajiga maanta markii uu isku dayay inuu bixiyo dhunkashadiisa! Si toos ah isha !! Maalintii aan sameeyey.
Sida laga soo xigtay wargeyska Daily Mirror, Cole's hooyadii Sue later ayaa ku daray sheeko u gaar ah: 'Sii taageeraha ku tuuray billiga !!'. Dhibaatada Facebook ayaa dib loo saaray. Sue Cole waxa uu wax ka qorey wax walba oo ku saabsan internetka Ferdinand's dhaawac.
Cole iyo Ferdinand waxay ku jireen xaalado xun sanadihii tan John Terry waxaa lagu eedeeyay cunsurinimada Rio ee walaalkiis Anton intii lagu jiray ciyaar. Cole ayaa taageeray saaxiibkiisii ​​hore ee Chelsea. Rio ayaa markii dambe ganaax ku soo rogay FA-da isagoo fariin qoraal ah ku daabacay Twitter-ka kaas oo loo yaqaan Cole 'barafka choc'. Matthew ayaa la yaabay inuu maqlo Rio Ferdinand jawaabteeda; "Ku alla kii boodhka tuuray, waa maxay tallaal! Ma rumaysan karo inay ahayd xashiish 2P ... .waxay ugu yaraan tahay £ 1 qalin! "
Ashley Cole Hooyo Sheeko Xogta Xogta Loo Yaqaan -Xaqiiqooyinka Qofka
Ashley Cole wuxuu leeyahay astaamaha soo socda ee shakhsiyadiisa. Bilaabidda, waxaanu ku siinaynaa faahfaahin ku saabsan sida uu uqaabilsan yahay rikoorka LifeBogger.
Awoodaha: Waa shaqaale mas'uulka ka ah oo shaqadana lagu edbiyo.
Tabar-darrada: Ash waxay mararka qaarkood sheeganeysaa inuu og yahay-dhan-dhan. Taas oo ku salaysan taariikhda xidhiidhka, tabar-dariimnimadu waxa ay ku jirtaa awood la'aanta inay u noqoto mid aamini karta lammaanihiisa.
Cole waa qof uu jecel yahay laba shay oo dhan xirfaddiisa. Kani waa "Waqti iyo masuuliyad". Wuxuu leeyahay oo ah xuddun madaxbannaan oo awood u leh horumarka weyn ee noloshiisa shaqsiyadeed iyo xirfadba. Wuxuu awood u leeyahay inuu wax ka barto qaladaadka iyo inuu kor ugu kaco isagoo ku salaysan khibradiisa iyo khibradiisa.
Ashley Cole Hooyo Sheeko Xogta Xogta Loo Yaqaan -Sababta loo yaqaan 'Nickname'
Sheekada sheekada oo dhan waxay ku bilaabatay maalinta 28th ee July 2006 markii guddoomiye ku xigeenka Arsenal David Dein uu xaqiijiyay in Arsenal iyo Chelsea ay ku jireen "Wadahadal sokeeye oo dhab ah" ku saabsan Ashley Cole. Heshiiska ayaa la dhacay markii Chelsea ay ku adkeysaneysay inay diiday dalabkooda £ 16million ee ay ku dooneyso Cole, laakiin Arsenal ayaa ku qiimeysay qiimaha £ 18million ee 25.
Waa arrin ku xiran tahay in Arsenal ay u soo bandhigtay Cole heshiis qandaraas kordhin ah oo uu ku sii joogayo kooxda, lakiin waa laga tagay "Gariir iyo kufsasho cadho leh" markay bixiyaan mushaharka £ 55,000 toddobaadkii, halka Chelsea ay u soo bandhigtay isaga £ 90,000 todobaad. Wadaxaajoodyadu waxay socdeen ilaa Agoosto 2006 waxayna u muuqatay in ay u socoto xagjir halis ah ka hor inta Ashley uu arrimihiisa gacanta u galay. Cole ayaa ku biiray Chelsea si uu ugu biiro 31 August isagoo ujiray £ 5 markii Arsenal ay ka careysiisay islamarkaana ay ka tagtay iyadoo kaliya ay dooneyso inay hesho William Gallas Chelsea oo qeyb ka ah heshiiskan.
Ciyaaryahankan ayaa ka careysiiyay taageerayaasha Arsenal, kaasoo haatan siiyey Ashley Cole "Cashley" laakiin ma ahan kaliya inuu ku soo laabto, lakiin waxa uu ku qarash gareeyey £ 20 wajigiisa markii Chelsea ay wajahday Arsenal.
Hase yeeshee, wuxuu ku biiray Chelsea markii dambe waxaa lagu sawiray sawirka hoose.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada Ashley Cole Childhood Story iyo xaqiiqda aan ku qorneyn. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo caddaalad. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!